Expert Semalt - Nduzi Nduzi Iji Wepu Web na Eke Ọgba
A na-akpọ ntanetị weebụ dịka usoro ntanetị nke eji eji wepụ ozi si na weebụsaịtị. Ihe kachasị mkpa nke usoro a bụ iji gbanwee data ndị a na-emeghi (usoro HTML) n'ime data ahaziri (nchekwa data ma ọ bụ nchekwa data). E nwere ụzọ dịgasị iche iche si eji scrapping web, mana ụzọ dị mfe ma dị mfe bụ site n'iji Python. Nke a bụ n'ihi na Python bara ọgaranya n'ichekwa ihe e kere eke dị ka ọ nwere "ebe mara MmaSoup" nke na-enyere aka n'iwepụta ozi.
Kemgbe ọtụtụ afọ, enweela mmụba dị ukwuu na nchọta maka nbudata weebụ dị ka o gosipụtara na ọ ga-arụ ọrụ nke ọma nye ọtụtụ. E nwere ụzọ dị iche iche nke mmadụ nwere ike isi wepu ozi weebụ dị ka iji API na ebe nrụọrụ weebụ dị ka Twitter, Google na Facebook mana nke a abụghị usoro a pụrụ ịdabere na ya dịka e nwere weebụsaịtị ndị na-adịghị enye IPS.
Ụlọ akwụkwọ achọrọ maka nchịkọta weebụ
Eke Ọgba bụ otu n'ime ihe ndị kachasị amasị na webwriter ka ọ na-enye ohere ka onye nwee ike inweta ọtụtụ ụlọ akwụkwọ nwere ike ịrụ ọrụ ọ bụla ma ọ dịkwa nfe na mfe ịchịkwa. Ụdị ụdị Python abụọ a na-ejikarị eme ihe n'iwepụ data gụnyere Urllib2 na BeautifulSoup. Urllib2 bụ modul Python nke enwere ike iji mee ihe na URL. N'aka nke ọzọ, BeautifulSoup bụ ngwá ọrụ eji eji ihe ọmụma dịka tebụl na eserese sitere na ibe weebụ.
Iwepu ibe weebụ site na iji BeautifulSoup
BeautifulSoup bụ otu n'ime ihe nchọgharị weebụ kachasị mkpa..Iji nwee ike iwepu ibe weebụ site na iji BeautifulSoup, e nwere nzọụkwụ dịgasị iche nke onye kwesịrị ịgbaso. Ha na-agụnye:
1. Bubata akwụkwọ ọmụmụ ndị dị mkpa - na nke a, a chọrọ ka a na-ebubata ọbá akwụkwọ ndị a chọrọ ka ha nweta ozi ha chọrọ
2. Jiri ọrụ "emee "iji lee nhazi nke HTML peeji nke - nke a bụ ihe dị oké mkpa dị ka ọ na - enyere mmadụ aka ịma mkpado ndị dị
3. Na - arụ ọrụ na mkpado HTML nke mkpado ndị a na - agụnye asambodo
4. Chọta okpokoro nri - ịchọta tebụl dị mma dị ka onye ga-enwe ike inweta data ziri ezi.
5. Wepụ ihe ọmụma na Data Frame- nke a bụ nzọụkwụ ikpeazụ ma na nke a, otu nwere ike nweta nsonaazụ ha chọrọ.
N'ụzọ yiri nke ahụ, a pụkwara iji BeautifulSoup rụọ ọrụ dịgasị iche iche nke nchịkọta weebụ dabere na mmasị mmadụ.
E nwere ndị na-eche na ha nwere ike iji okwu mgbe niile kama ịchọta weebụ dị ka BeautifulSoup ma nweta nhapụta yiri ya. Nke a agaghị ekwe omume n'ihi na enwere ọtụtụ esemokwu n'etiti BeautifulSoup na okwu niile na njedebe ha dị iche iche. Dịka ọmụmaatụ, BeautifulSoup Koodu na-agbasiwanye ike karịa ndị e dere ede na mgbe niile Source .
Ya mere, iji ntanetị weebụ eme ihe n'ụzọ dị irè dịka mmadụ nwere ike isi nweta nsonaazụ ọma